Gaboraraka eto Iarivo sy ny manodidina Midina eny an-dalambe hatramin’ny omby
Miditra an-tsehatra eny amin’ny arabe amin’ny andro atoandro amin’ny 11 ora sy sasany ihany koa ny ombin-tsarety eto Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina.
Andralanitra Olona telo tratra nandoro ny toerana fanariam-pako
Setroka be tsy nifankahitana teny Ambatomaro sy Andralanitra omaly ka nampitaraina ny mponina. Ankoatra ny fofona nentin’ilay setroka izay voalaza fa nahery vaika tokoa dia maizina ihany koa ny tanàna.
Fitadiavam-bola ho fampidirana an-tsekoly Mikarakara “Tombola” lehibe ny Agua de Coco sy Bel Avenir
Mikarakara “Tombola” lehibe amin’izao fotoana izao ny Fikambanana vahiny Agua de Coco sy ireo mpiara-miombon’antoka Malagasy miaraka aminy, dia ny Bel Avenir sy ny Hôtel Solidaire Mangily (HSM).
Fako miparitaka Ahiana hampahazo vahana ny pesta indray
Manomboka miparitaka indray ny fako eto an-drenivohitra. Ankoatra ny eny Anosizato Atsinanana dia anisan’ny nahitana fako nivangongo koa teny Andraisoro.
Hopitaly HJRA Olona roa voapoizin’ny toaka, avotra ihany
Tsy nisy olona toran’ny toaka nentina tao amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha tamin’ny sabotsy alina lasa teo nandritra ny fitsenana ny ekipam-pirenena BAREA, hoy ny profesora Olivat na dia tena nifety aza ny vahoaka Malagasy.
Anosy sy ny manodidina Tsy maintsy esorina daholo ireo mpivarotra amoron-dalana
Nanomboka ny herinandro lasa teo nitohy tamin’ity herinandro ity ny fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana mitoby manoloana ny ranon’Anosy.
Hain-trano teny Andravoahangy Tsena Nanampy ireo traboina ny CUA
Trano 20 tafo no may kila forehitra ny sabotsy 13 jolay lasa teo tokony ho tamin’ny 6 ora 30 minitra hariva, teny amin’ny fokontany Andravoahangy tsena Boriborintany faha-3, kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA).
Miverina tampoka ny jiro aorian’izany ary mety hahery na kely hery raha oharina amin’ny mahazatra, antony mamotika ireo karazam-pitaovana maro samihafa mandeha amin’ny herinaratra eny an-toerana toy ny solosaina fampiasa ao amin’ny birao. Mahita faisana avokoa na tokantrano na mpivarotra na orinasa na toeram-pianarana. Ho an’ny “Centre de formation professionnelle en informatique et de gestion” CFProig izay hany ivontoerana tokana manofana ireo tanora eny an-toerana dia efa tafakatra folo hatreto ny isan’ireo solosaina fampiasana amin’ny birao potika tanteraka. Voatery mampiasa solosaina entin-tanana izy ireo vokatr’izany mba hanampiana ireo ankizy mpianatra eny ambanivohitra. Raha araka ny fanazavan-dRabenatoandro Minomanana, mpampianatra ao amin’ny CFProig moa dia efa nisy ny fitarainana nataon’izy ireo niaraka tamin’ny fokontany sy ny kaominina teo anivon’ny JIRAMA saingy valin-teny boribory no azony dia ny tsy maintsy hanoloan’izy ireo ny “transformateur” eny an-toerana izay tena lafo dia lafo tokoa. Miantso ny hijeren’ny fanjakana ny olana sedrain’ny ivontoeram-pampiofanana manofana tanora tahaka azy ireo araka izany Rabenatoandro Minomanana. Nisy ny famoahana mpianatra notanterahin’izy ireo ny faran’ny herinandro teo. Miisa 45 mianadahy izy ireo, nianatra nandritra ny telo volana sy tapany ka anisan’ireny ny opérateur de saisie, ny informatique bureatique, ny comptabilité generale informatisé…Tanjon’ity ivontoerana iray ity ny hanampiana ireo tanora eny ambanivolo tsy hanaotao foana toy ny fidorohana zava-mahadomelina, ny fanaovana firaisana ara-nofo aloha loatra izay mitarika any amin’ny vohoka tsy niriana aloha loatra….ankoatra ny ady amin’ny tsy fananan’asa.